Google Fi: Onye ọrụ Google ga-abịa Europe | Gam akporosis
Afọ atọ gara aga Google mepụtara onye ọrụ ya na United States. Ọ bụ ihe ụlọ ọrụ ahụ mere dị ka nnwale, maka otu ekwentị ya. Na mbu, ọ bịara n'okpuru aha Project Fi, nke mechara ghọọ Google Fi, aha nke ejiri ya mara taa. Ruo ugbu a, ọ naghị arụ ọrụ na Europe, ọ bụ ezie na nke a bụ ihe nwere ike ịgbanwe n'oge na-adịghị anya.
Ụlọ ọrụ ahụ edebanyela aha Google Fi na Europe. Omume nke meela ka ọtụtụ ndị kwuo okwu banyere ọbịbịa nke onye ọrụ a na ahịa European ahịa. Onye ọrụ na, na-enweghị ịbụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa, nwere ike inye ọtụtụ ihe maka ikwu.
Aha mgbanwe nke onye ọrụ a na Google Fi bụ nzọụkwụ dị mkpa. Ebe ọ bụ na n'ụzọ a, ọ hapụrụ usoro nnwale ahụ nke ọ malitere na ụbọchị ya. Ọ ghọrọ nnukwu nzọ na ụlọ ọrụ ndị America. Ọ na-apụta maka ịnwe ọtụtụ njirimara pụrụ iche, nke anyị na-enweghị na ọnụego sitere na ndị ọrụ ndị ọzọ.
N'otu aka, ekwesiri ighota na obu onye oru nke onu ogugu ya na agbanwe agbanwe. Ọ na-agbanwe ọnwa kwa ọnwa, nke mere na ọ ga-eweghachi gị ego maka data ị na-ewebeghị maka ọnwa na-esote. Ọ bụ ezie na, ihe dị ugbu a ka ọrụ kpakpando ya bụ na awade na-agagharị na ihe karịrị mba 170. Ya mere ị nwere ike ịga njem ma gaa n'ihu na-eme nchọgharị n'enweghị nsogbu n'oge ezumike a. Akụkụ nke dị iche na ndị ọrụ ndị ọzọ.
Nke a ga-ekwe omume n'ihi na Google Fi na-eji akụrụngwa nke ndị ọrụ ndị ọzọ. N'ihe banyere United States, ha na-eji akụrụngwa T-Mobile, Sprint na US Cellular eme ihe mgbe niile. Yabụ n'ụzọ ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ yiri nke MVNO ndị ọzọ dịka nke anyị nwere na Spain. Chee aha dika Lowi ma obu Ekwentị.
Google Fi enwere ohere na Europe?
Onye ụlọ ọrụ aha aha Google Fi na Europe dị ka ụghalaahia ọ nwere ike ịpụta ọtụtụ ihe. Ọ bụghị nkwenye doro anya na onye ọrụ a ga-abanye ahịa ahịa kọntinent ochie. Mana ụlọ ọrụ ndị America achọghị ịchịkwa ohere a. Ọ bụ ezie na asịrị na-egosi na mbata ya dị nso karịa mgbe ọ bụla.
Echiche nke Google Fi na-ebuli dị ezigbo mma. Ọnụego mgbanwe, nke a na-emegharị kwa ọnwa dabere na njiri onye ọrụ. Ọ bụrụ na anyị agbakwunye na nke a ị nwere njegharị dị n'ọtụtụ mba, mgbe ahụ ọ bụ nchikota mara mma. Ọ nwere ihe niile onye ọrụ chọrọ taa. Ma, ọ nwere akụkụ na-adịghị mma. Akụkụ a na-adịghị mma bụ ụgwọ ya.
Ebe ọ bụ na ọ bụrụ na anyị elekwasị anya na ọnụego ndị enyere ugbu a na United States, anyị nwere ike ịhụ nke ahụ ọnụahịa ha dị elu n'ezie. Karịsịa ma ọ bụrụ na anyị ejiri ha tụnyere ọnụego a na-enye ugbu a na Spain ma ọ bụ na mba ndị ọzọ na Europe. Ihe ga - eme ka o sie ike ịbanye n'ahịa nke kọntinent ochie.
Na foto a anyị nwere ike ịhụ ọnụego atọ Google Fi na-enye ugbu a na United States. Site na mbido anyị nwere ike ịhụ na ọnụahịa ndị ahụ adịghị ọnụ ala, n'agbanyeghị na ha dị na dollar.
Onu ogugu: $ 20 maka oku na ozi a na-akparaghị ókè: Ọnụ ọgụgụ ntọala ọ na-enye gụnyere ihe ọtụtụ ọnụego na-enwekarị na Spain. Anyị nwere oku na ozi na-enweghị njedebe, na mgbakwunye na data mkpanaka
Agbanyeghị GB ọ bụla na-efu $ 10: Nke a bụ otu isi ike na onye ọrụ nwere. Ọnụahịa dị elu na 2015 ma dị elu nke ukwuu taa. Ebe ọ bụ na n’ikpeazụ, ọ na - akpata na ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ na - eri ọtụtụ data, ị ga - akwụ nnukwu ụgwọ kwa ọnwa.
Site na 6 GB nke ojiji ị nweta data na-akparaghị ókè: Ọ bụ ọnụego kachasị elu. Gaghị akwụ ụgwọ ihe karịrị $ 80 kwa ọnwa. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị gafee 25 GB, ọsọ ahụ ga-ebelata.
Na nkenke, Google Fi nwere ike ịbụ nhọrọ nke mmasị na Europe, ọ bụrụhaala na ọnụahịa ha dị ala ma na-asọmpi. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ bụghị na ọ ga-enwe nnukwu ohere iji merie ahịa a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ndị ọrụ ekwentị » Google Fi: Onye ọrụ Google na-akwadebe ịbanye Europe
Huawei na-ezube izipu ngwaọrụ 250 nde site na 2019